Global Voices teny Malagasy » Mitantara momba ny rivodoza ireo bilaogera Bangladeshita · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Aogositra 2018 3:55 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Milaza ny fanehoan-kevitr'izy ireo momba ny loza voajanahary ao amin'ny bilaoginy teny Anglisy, Bangladesh from our view  sy ny bilaoginy amin'ny teny Bangla, Amader Kotha  ireo bilaogeran'ny Nari Jibon .
Kazi Rafiqul Islam milaza ny zava-niainany  avy any an-drenivohitra Dhaka:
Sofia Khatun  [bn]: “Bangla an-tapitrisany no tsy misy mamonjy. Atolory ny tananao azafady.”
Zannat Ara Amzad Liva  [bn]: “Misy fanontaniana ato an-tsaiko hoe nahoana io fahatezeran'ny natiora io no nihatra tamin'ny ankizy tsy manan-tsiny, sy ny olona tena mahantra?”
Irin Sultana  [bn] “Mbola mila rano fisotro, sakafo, lamba sy fanafody ireo olona niharan'ny rivodoza. Nahatonga olona maro tsy hanam-bola ity rivodoza ity. “
Laily Jahan Meghla  [bn] “ny vaovao tena nampalahelo ahy mafy dia nisy zazavavy kely teraka ny marainan'ny 15 Novambra tao Shariatpur ary maty tao anatin'ny orambe avy eo tamin'ny alina.”
Taslima Akhter  “Tao anatin'ny tahotra no nandaniana ny alina. Nanjary narary aho sy ny fianakaviako satria tsy maintsy lenan'ny orana”
Mitantara momba ny faharetana manome aingam-panahy avy amin'ny mpianatra sy ny mpiasan'ny Nari Jibon  ny tale mpanatanteraka ao amin'ny Nari Jibon, Dr. Kathryn Ward. Nankany amin'ny birao ny mpiasa sy ny mpianatry ny tetikasa Nari Jibon tamin'ny asabotsy mba hiasa sy hianatra na dia teo aza ny tsy fisian'ny herinaratra sy ny aterineto. Nandefa vaovao farany  momba ny toe-draharaha sy ny ezaka fanavotana ihany koa izy.
MG Rabbany Sujan indray mampiseho sary  ny amin'ny fomba iatrehan'ny mponina ao amin'ny faritra mahantra ao an-drenivohitr'i Dhaka ny fahavoazana nateraky ny rivodoza sokajy 3. Nandefa tatitra  sy sary vaovao bebe kokoa  izay nasongadina tao amin'ny CNN mihitsy i Sujan. Natao fanadihadiana tao amin'ny CNN ihany koa i Rafiq na dia teo aza ny fifandraisana ratsy an-telefônina.
Nandefa sary sy vaovao  momba ny ezaka fanavotana nataon'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana ihany koa i Sujan.
Ny Zoma lasa teo, nikarakara fampiofanana momba ny lahatsary sy ny sary nomerika ho an'ireo vehivavy bilaogera  ny tetikasa Nari Jibon. Hoy i Shirin Sultana, mpandray anjara hoe:
Vakio ireo fanehoan-kevitra maro avy amin'ireo mpandray anjara .
Ity misy lahatsary nalefan'ny  ekipan'ny Nari Jibon tamin'ny volana jolay lasa teo, mampiseho ny tondra-drano tany amin'ny faritra iva ao Dhaka, renivohitra. Tsy ho ela dia hahita sary sy lahatsary maro avy amin'ireo mpandray anjara nanatrika ny atrikasa vao haingana isika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/27/124830/
 milaza ny zava-niainany: http://narijibon.blogspot.com/2007/11/my-experiences-of-cyclone-sidr.html
 faharetana manome aingam-panahy avy amin'ny mpianatra sy ny mpiasan'ny Nari Jibon: http://narijibon.blogspot.com/2007/11/resilient-staff-and-students-of-nari.html
 vaovao farany: http://narijibon.blogspot.com/2007/11/post-cyclone-sidr-donations-for.html
 mampiseho sary: http://narijibon.blogspot.com/2007/11/after-cyclone-sidr.html
 bebe kokoa: http://narijibon.blogspot.com/2007/11/after-cyclone-sidr-3.html
 sary sy vaovao: http://narijibon.blogspot.com/2007/11/how-we-can-help-cyclone-sidr-affected.html
 nikarakara fampiofanana momba ny lahatsary sy ny sary nomerika ho an'ireo vehivavy bilaogera: http://narijibon.blogspot.com/2007/11/nari-jibon-blog-training-on-video-and.html
 Ity misy lahatsary nalefan'ny: http://narijibon.blogspot.com/2007/08/sample-video-of-flood-affected-area-of.html